July 2021 - Page2of5- Myanmar Fire Services Department
မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်တွင် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဘီးလင်းမြစ်ရေ မြင့်တက်လာပြီး လူနေအိမ်များ ....
မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်တွင် ၂၇.၇.၂၀၂၁ရက်နေ့၊ ၁၄ ၂၅ အချိန်ခန့်က မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဘီးလင်းမြစ်ရေ မြင့်တက်လာပြီး လူနေအိမ်များအတွင်း ရေများဝင်ရောက်နေ ကြောင်း ဘီးလင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ ၁၄ ၂၇ အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့် သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊...
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ဓနိတောတိုးချဲ့(မြေနိမ့်ပိုင်း)နှင့် ရန်မျိုးအောင် ရပ်ကွက် ဓနိတောတ ....
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ဓနိတောတိုးချဲ့(မြေနိမ့်ပိုင်း)နှင့် ရန်မျိုးအောင် ရပ်ကွက် ဓနိတောတိုးချဲ့(မြေနိမ့်ပိုင်း)များတွင် ၂၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၇ ၁၀ အချိန်ခန့်က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် ရေ(၂)ပေခန့်ဝင်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း ရေးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ...
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ နန်းခဲရပ်ကွက်၊ နန္ဒဝန်ကျောင်းလမ်း၊ ခရိုင်ရဲစခန်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအနောက်ဘက်တွင် သစ်ပင်လ� ....
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ နန်းခဲရပ်ကွက်၊ နန္ဒဝန်ကျောင်းလမ်းရှိ ခရိုင်ရဲစခန်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အနောက်ဘက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ၂၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၁ ၁၀ အချိန်ခန့်က လုံးပတ်(၆)ပေ၊ အရှည်(၄၅)ပေခန့်ရှိသော မဲဇလီပင် လဲကျမှုဖြစ်ပွားကြောင်း သထုံမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ...
Tree fallen in Nhinpale village, Bilin township, Mon state
editor | Jul 24, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
23.7.2021 at about 14 20 – Belin township fire station receivedacall that tree fell down onto the road and blocked the traffic after the heavy rain in Hninpale village, Belin township, Mon state. Upon the call, 8 fire fighters and5auxiliary firefighters were...
Traffic accident on Yangon-Naypyitaw highway, Yaytarshay township, Bago region
editor | Jul 22, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
21.7.2021 at about 02 50 – fire personnel from Palway highway fire station and Thargara highway fire station responded to the truck accident occurred between the mile post no (185/1) and (185/2), Yangon-Naypyitaw highwa, Yaytarshay township, Bago region. The...